စဉ် တင်ဒါအမှတ်နှင့် လုပ်ငန်းအမည် ကမ်းလှမ်းသည့်
ကုမ္ပဏီ တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ဈေးနှုန်း မှတ်ချက်
PPRD/ CON/ CAP/ T/ 1 (2021-2022) (6 Months)National Petroleum Laboratory and Online Monitoring Center ရုံးအဆောက်အဦသစ် RC(၂) ထပ် (ငလျင်ဒဏ်ခံအဆောက်အဦ)ဆောက်လုပ်နိုင်ရေး အတွက် အကြိုအင်ဂျင်နီယာ လုပ်ငန်းများဖြစ်သောမြေ စမ်းသပ်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် ဒီဇိုင်းပုံစံများရေးဆွဲခြင်း လုပ်ငန်း (၁) Glorle Com Services Co.,Ltd.
(၂) Myanmar Seilone Construction Co.,Ltd. Glorle Com Services Co.,Ltd. 20,000,000.00
(၂) PPRD/ CON/ CAP/ T/2(2021-2022) (6 Months)National Petroleum Laboratory and Online Monitoring Center ရုံးအဆောက်အဦသစ်RC (၂)ထပ် (ငလျင်ဒဏ်ခံအဆောက်အဦ)ဆောက်လုပ်နိုင်ရေး မြေနေရာရှင်းလင်းခြင်း ၊ မြေတူးခြင်း၊ မြေဖြတ်ခြင်းနှင့် မြေသားများ ညှိခြင်းလုပ်ငန်း (၁) HeliumEngineering Group Co.,Ltd.
(၂)Green KSK Brothers Co.,Ltd.
(၃)Popa Land Co.,Ltd. Helium Engineering Group Co.,Ltd. 24,750,000.00
Download Link : New_Microsoft_Excel_Worksheet.pdf